Semalt: I-Best Web Scraper Ukukhipha Idatha Ye-Inthanethi
Ukucutshungulwa kokuqukethwe noma i-web scrap ing inqubo yokusebenzisa isofthiwe ekhethekile noma uhlelo lokusebenza lewebhu ukuze kukhuliswe okuqukethwe kusuka kuwebhusayithi. Ukufakela isikhalazo kubangani be-webmasters nabathuthukisi abafuna ukuthola okusheshayo ukufinyelela kokuthola ulwazi olukhona kwamanye amasayithi.
Izicelo zokucutshungulwa kokuqukethwe
Ukukhwabanisa kweWeb kungenziwa ngendlela engalungile ngokusetshenziswa kwe-imeyili yokuthengisa, ukugaxekile , nama-robocalls - commercial vehile bluebook. Ngenxa yalokhu, abaningi be-webmasters bakhetha ukuhlala kude nabo. Kodwa-ke, uma kwenziwa i-web scraping ye-ethics ethize kungaba yindlela enamandla kakhulu yokuzuza kumaphrojekthi wewebhu.
Ungasetshenziswa kanjani ukudweba
Ake sicabangele isiqondisi se-intanethi kuwo wonke amahhotela endaweni. Uma umthuthukisi we-website ufuna ukuhlanganisa wonke amahhotela, kuzodingeka afake phakathi kwedatha ngesandla. Le nqubo ivame ukuthatha amashumi ezinkulungwane zamahora ukuqinisekisa ukuthi zonke ihhotela ezweni lifakiwe. Nge-23 (web) ye-web scraper , lowo webmaster ongangena angafaka imibuzo yokusesha bese ebutha leyo datha ngokuzenzakalelayo kusuka kumasayithi ahlukahlukene.
Yakha noma Thenga I-Web Scraper?
Uma ufuna ithuluzi le-web scraping, ungakha eyodwa kusukela ekuqaleni noma usebenzise kakade okhona. Iningi labathuthukisi abanalo amakhono adingekayo, ulwazi, amathuluzi, noma izinsiza zokwakha ithuluzi lokuhlunga ngesandla. Izindaba ezinhle ukuthi kunezinqwaba ze-scrapers ezakhiwe ngaphambilini.
Izindlela Nezobuchwepheshe ezisetshenziswe kwi-Web Scraping Software
Uma uzokwakha i-scraper yakho, udinga ukuqonda ukuthi yiziphi ubuchwepheshe ezihilelekile ekuqoqeni idatha. Iningi le-scrapers lakhiwe nge-HTML, isebenzisa i-DOM parsing (ukuxubungula imodeli yento yedokhumenti) ukuhlunga nge-HTML ukuze kukhishwe ulwazi olufunayo kuphela. Kufanele uqaphele ama-divs, ama-spans, amakilasi, nezinto zezinhlu zedatha ofuna ukuyifaka bese uzifaka kuzilungiselelo zakho.
I-Mozenda Scraping Technology